Laamaha ammaanka oo Muqdisho ku qabtay Maandooriyaal iyo Hub Amni daro loo adeegsanayay | Somali National Television - sntv.so
Home BENAADIR Laamaha ammaanka oo Muqdisho ku qabtay Maandooriyaal iyo Hub Amni daro loo...
Kadib howlgal ay Ciidamada ammaanka ay xalay ka sameeyeen xaafado ku yaala degmada Wadajir ee Gobolkan Banaadir ayaa waxaa ay ku soo qabteen waxyaabaha Maanka Dooriya oo isugu jira Xashiish,markii ay ka war heleen guriga lagu diyaarinayay maandooriyahaasi.
Muddadii uu howlgalkaasi socday ayaa Sidoo kale Ciidamadu waxa ay soo qabteen Laba Qori iyo Laba Bastoolad, kuwaasi oo si sharci daro ah loogu heystay gudaha degmada,kuwaasi oo lagu dhibaatayn jiray dadka shacabka ah.
Goobta howlgalkaasi ay ciidamadu ka sameeyeen ayaa waxaa markii dambe tagay Guddoomiye ku-xigeenka Koowaad ee dhanka siyaasadda iyo amniga Maamulka Gobolka Gobolka Banaadir Maxamed C/llaahi Maxamed Tuulax iyo saraakiil ka tirsan ciidamada amaanka,iyagoo u kuurgalayay sida uu u dhacay howlgalkaasi qorsheysnaa.
Saraakiisha ammaanka ayaa ku tilmaamay howlgalkaasi in uu ahaa mid qorsheysan,islamarkaana uu qeyb ka yahay qorshaha sugidda amniga Caasimadda.
Howlgalada ayaa ah kuwo joogto ah,iyadoo sidoo kale shalay ay hay’adaha ammaanka dowladda Soomaaliya ay dekedda Muqdisho ku qabteen Maandooriyaal badeeco ahaan loogu iib geyn rabay Muqdisho.
Previous articleSomalia calls for UN intervention against UAE base in Berbera
Next articleWasiirrada Arrimaha Dibadda Soomaaliya iyo Kenya oo ka wada-hadlay arrinta xuduudda labada Dal